Nyaya Youpenyu: Ndakafirwa naBaba Ndikawana Vamwe Baba | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Yakataurwa naGerrit Lösch
BABA vangu vakaberekerwa muGraz, kuAustria, muna 1899, saka vainge chiri vadiki pakarwiwa Hondo Yenyika I. Hondo Yenyika II ichangotanga muna 1939, vakanzi vapinde muchiuto vachirwira Germany. Vakafira muhondo kuRussia muna 1943. Panguva iyoyo ndaingova nemakore anenge maviri chete. Handina kumbowana mukana wokunyatsovaziva, uye ndainzwawo shungu dzokuva nababa, kunyanya pandaiona kuti vakomana vakawanda vekuchikoro vaiva nanababa vavo. Pandainge ndava mumakore okuyaruka, ndakanyaradzwa nokudzidza nezvaBaba vedu vakuru vokudenga vasingafi.—Hab. 1:12.
ZVATAIITA TIRI MABOY SCOUTS
Pandaiva nemakore manomwe, ndakava nhengo yechikwata chevechidiki chemaBoy Scouts. Sangano iri rinowanikwa munyika yose uye rakatangwa muna 1908 kuGreat Britain nemukuru-mukuru wemauto eBritain ainzi Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Muna 1916 akatanga chimwe chikwata chainzi Wolf Cubs (kana kuti Cub Scouts) uye chikwata ichi chaiva chevakomana vadiki vezera rangu.
Ndainakidzwa nokunogara musango pakupera kwevhiki, uko kwatairara mumatende, tichipfeka mayunifomu uye tichimacha pairidzwa ngoma. Ndainyanya kufarira kuva nevamwe vechidiki, kuimba kwataiita manheru tichidziya moto uye mitambo yataiita musango. Taidzidzawo zvakawanda nezvezvinhu zvakasikwa, uye izvozvo zvakaita kuti ndiwedzere kufarira mabasa oMusiki wedu.
MaBoy Scouts anokurudzirwa kuita chimwe chinhu chakanaka zuva rimwe nerimwe. Taikwazisana tichiti “Takagadzirira.” Izvozvo zvaindinakidza chaizvo. Muchikwata chedu chevakomana vaipfuura 100, vanenge hafu vaipinda chechi yeRoma, imwe hafu yaipinda chechi dzakabuda mune yeRoma, uye mumwe chete aiva muBhudha.
Kubva muna 1920, musangano wenyika dzose wemaScout wave uchiitwa pashure pemakore mashomanana ega ega. Muna August 1951, ndakapinda musangano wechi7 weWorld Scout Jamboree muBad Ischl, kuAustria, uye muna August 1957 ndakapinda wechi9 kuSutton Park, pedyo neBirmingham, kuEngland. Pane watakaita muna August 1957, paiva nevana 33 000 vakabva munyika 85. Paivawo nevanhu vanenge 750 000 vakatishanyira, kusanganisira Queen Elizabeth vokuEngland. Ndaiona sokuti vanhu vandaiva navo pamusangano uyu vaiva hama dzangu dzinobva munyika yose. Ndaisatomboziva kuti munguva pfupi ndaizova nehama chaidzo dzandinonamata nadzo dzinobva munyika yose.
PANDAKATANGA KUONANA NECHAPUPU CHAJEHOVHA
Rudi Tschiggerl uyo aiva kuki ndiye akatanga kundiparidzira
Munenge muna March kana kuti April 1958, ndakanga ndava kupedza kudzidzira basa rouhweta paGrand Hotel Wiesler yaiva muguta reGraz, kuAustria. Pahotera iyoyo ndakaparidzirwa nemumwe wandaishanda naye aiva kuki ainzi Rudolf Tschiggerl. Ndainge ndisati ndambonzwa chokwadi cheBhaibheri. Akatanga kutaura nezvedzidziso yeUtatu uye akati haisi yeBhaibheri. Ndakamurambira uye ndaida kumuratidza kuti ainge akarasika. Ndaimufarira chaizvo uye ndaida kumunyengetedza kuti adzoke muchechi yeRoma.
Rudolf uyo wataidana kuti Rudi, akati aida kunditsvakira Bhaibheri. Ndakamuudza kuti ndaingoda Bhaibheri rechechi yeRoma. Saka akanditsvakira ndikatanga kuriverenga uye muBhaibheri racho ainge aisa katurakiti kakadhindwa neWatchtower Society. Ndakamuti ndaisada mapepa akadaro nokuti aigona kunge akanyorwa nenzira inoita seyechokwadi asi iwo achitaura zvenhema. Asi ndaida kukurukura naye Bhaibheri. Rudi akaratidza kuchenjera uye haana kuzondipazve mabhuku okuverenga. Kwemwedzi inenge mitatu, taipota tichikurukura zvinotaurwa neBhaibheri uye pamwe pacho taitosvika pakati peusiku.
Pandakapedza kudzidzira basa pahotera yaiva kwandaigara kuGraz, amai vangu vakandibhadharira mari yokuti ndienderere mberi nedzidzo pane chimwe chikoro chaidzidzisa vashandi vepahotera. Saka ndakanogara kuBad Hofgastein, taundi raiva munzvimbo yemakomo yeAlps, kwaiva nechikoro chacho. Chikoro ichi chaidyidzana neGrand Hotel iri kuBad Hofgastein uye dzimwe nguva ndaishanda pahotera yacho kuitira kuti ndiwedzere ruzivo rwangu.
KUSHANYIRWA NEHANZVADZI MBIRI DZAIVA MAMISHINARI
Ilse Unterdörfer naElfriede Löhr vakatanga kudzidza neni Bhaibheri muna 1958
Rudi ainge atumira kero yangu itsva kuhofisi yebazi kuVienna, uye bazi rakabva ratumira kero yacho kuhanzvadzi mbiri dzaiva mamishinari, Ilse Unterdörfer naElfriede Löhr. * Rimwe zuva mushandi wepanosvikira vaenzi pahotera akandidaidza uye akandiudza kuti paiva nevakadzi vaviri vaiva panze mumotokari vaida kundiona. Ndakanetseka nokuti ndakanga ndisingambozivi nezvavo. Asi ndakaenda kunoona kuti vaiva vanaani. Ndakatozoziva kuti basa redu parairambidzwa muNazi Germany, Hondo Yenyika II isati yatanga, hanzvadzi idzi dzaiitawo basa rokutakura mabhuku edu. Vainge vatombosungwawo nemapurisa okuGermany (Gestapo) vakaendeswa kumusasa wevasungwa weLichtenburg. Munguva yehondo, vakazoendeswa kumusasa waiva kuRavensbrück pedyo neBerlin.
Hanzvadzi dzacho dzaiva dzemazera mamwe chete naamai vangu, saka ndaidziremekedza chaizvo. Handina kuda kuvapedzera nguva yavo nokubvuma kukurukura navo asi ndozoti handichada kudzidza papera mavhiki mashomanene kana mwedzi. Saka ndakavakumbira kuti vangondiunzira magwaro aitaura nezvedzidziso yeRoma yokutsiviwa kwevaapostora. Ndakavaudza kuti ndaizonokurukura magwaro aya nemupristi. Ndaifunga kuti ndaizobva ndaona kuti chokwadi ndechipi.
KUDZIDZA NEZVABABA VATSVENE UYE VECHOKWADI VARI KUDENGA
Dzidziso yechechi yeRoma yokutsiviwa kwevaapostora inoti muapostora Petro ndiye aiva papa wokutanga uye kubva ipapo vanapapa vanoramba vachitsivana. (Uku kududzira zvisizvo mashoko aJesu ari pana Mateu 16:18, 19.) Chechi yeRoma inotiwo zvose zvinotaurwa napapa ndezvechokwadi kana achitaura zvinhu zvine chokuita nedzidziso. Ndaidavirawo izvozvo uye ndaifunga kuti dzidziso yoUtatu ndeyechokwadi nokuti ndizvo zvaidzidziswa napapa uyo anonzi Baba Vatsvene nevanhu vechechi yeRoma. Asi kana aikanganisa paaitaura, dzidziso yacho yaifanira kunge iri yenhema. Ndokusaka vanhu vechechi yeRoma vakawanda vachikoshesa chaizvo dzidziso iyoyo, nokuti ndiyo inoita kuti vazodavira kuti dzimwe dzidziso dzavo dzose ndedzechokwadi!
Pandakaenda kumupristi, akatadza kupindura mibvunzo yangu asi akandipa bhuku reRoma raitaura nezvekutsiviwa kwavanapapa. Ndakaenda naro kumba ndikariverenga ndikadzoka ndava nemimwe mibvunzo yakawanda. Mupristi aona kuti atadza kupindura mibvunzo yangu, akati: “Handingakwanisi kuita kuti utende zvandinotenda uye iwe haukwanisiwo kundisiyisa zvandinotenda. . . . Ndapedza newe!” Haana kuda kuzombotaurazve neni.
Panguva iyoyo ndainge ndava nechido chokudzidza Bhaibheri naIlse naElfriede. Vakandidzidzisa zvakawanda nezvaBaba Vatsvene vechokwadi, Jehovha Mwari. (Joh. 17:11) Panguva iyoyo munzvimbo iyi maisava neungano saka hanzvadzi mbiri idzi dzaiitisa misangano paimba yeimwe mhuri yaifarira. Paingova nevanhu vashoma vaipinda. Hanzvadzi idzi dzaiwanzoita zvokukurukurirana zvikamu zvemisangano dziri mbiri nokuti paisava nehama yakabhabhatidzwa yaikwanisa kutungamirira. Paiva neimwe hama yaipota ichiuya kuzopa hurukuro yavose pane imwe nzvimbo yairendwa.
PANDAKATANGA KUITA BASA ROKUPARIDZA
Ilse naElfriede vakatanga kudzidza Bhaibheri neni muna October 1958, uye ndakabhabhatidzwa pashure pemwedzi mitatu muna January 1959. Ndisati ndabhabhatidzwa, ndakavakumbira kuti ndibude navo muushumiri hwepaimba neimba kuti ndingoona kuti basa rokuparidza raiitwa sei. (Mab. 20:20) Pandakabuda navo kekutanga, ndakakumbira kuti kana zvichiita ndive nendima yangu yokushanda. Vakandipa mumwe musha wokushanda uye ndaienda ndoga ikoko ndichinoparidza paimba neimba uye ndaidzokerawo kunoona vaifarira. Hama yokutanga yandakabuda nayo muushumiri hwepaimba neimba yaiva mutariri wedunhu uyo akazotishanyira.
Muna 1960 pashure pokunge ndapedza kosi yokudzidzira basa repahotera, ndakadzokera kumba kuti ndinobatsira hama dzangu kuti dzidzidze chokwadi cheBhaibheri. Kusvika iye zvino, hapana kana mumwe wavo ati agamuchira chokwadi, asi vamwe vavo vari kuratidza kufarira.
BASA RENGUVA YAKAZARA
Pandaiva nemakore okuma20
Muna 1961, bazi rakanyorera ungano tsamba dzaikurudzira vanhu kuti vapayone. Ndainge ndisati ndaroora uye ndiine utano hwakanaka, saka ndakaona pasina chainditadzisa kupayona. Ndakabvunza mutariri wedunhu ainzi Kurt Kuhn kuti aiti kudii nezvandaifunga zvokumboshanda basa rokunyika kwemwedzi mishoma yaitevera kuti ndikwanise kutenga motokari iyo yaizondibatsira pakupayona. Akandipindura kuti, “Jesu nevaapostora vaifanira kuva nemotokari here kuti vaite basa renguva yakazara?” Mubvunzo wavo wakandibatsira kuziva zvokusarudza. Ndakaronga kuti ndibve ndangotanga kupayona. Asi nemhaka yokuti ndaishanda pahotera kwemaawa 72 pavhiki, ndaifanira kutanga ndagadzirisa purogiramu yangu.
Ndakakumbira mukuru wangu webasa kuti andibvumire kushanda maawa 60 pavhiki. Akandibvumira uye peyi yangu haina kuchinja. Pave paya, ndakamukumbirazve kuti andibvumire kushanda maawa 48 chete pavhiki. Akabvuma uye peyi yangu haina kuchinja. Ndakamukumbirazve kuti ndishande maawa 36 chete pavhiki kana kuti maawa matanhatu pazuva kwemazuva matanhatu uye akabvuma. Chinoshamisa ndechokuti peyi yangu haina kumbochinja. Mukuru wangu webasa anenge aisada kuti ndiende. Purogiramu iyi yakaita kuti ndikwanise kutanga kupayona. Panguva iyoyo, piyona wenguva dzose aifanira kusvitsa maawa 100 pamwedzi.
Papera mwedzi mina, ndakagadzwa kuva piyona chaiye uye kuva muranda weungano muungano duku yaiva mutaundi reSpittal an der Drau muCarinthia. Panguva iyoyo, piyona chaiye aifanira kusvitsa maawa 150 pamwedzi. Ndaipayona ndiri ndega asi ndaikoshesa kutsigirwa kwandiitwa muushumiri neimwe hanzvadzi yainzi Gertrude Lobner, iyo yaishanda semubatsiri wemuranda weungano. *
MAMWE MABASA ANDAKAITA
Muna 1963, ndakanzi ndive mutariri wedunhu. Dzimwe nguva ndaikwira chitima kubva paungano kuenda kune imwe ungano ndakatakura masutukezi airema. Hama dzakawanda dzaisava nemotokari, saka hapana aikwanisa kuuya kuzonditambira pachiteshi chezvitima. Ndaisada kushamisira, saka ndaisakwira tekisi kuenda kumba kwandainogara asi ndaifamba netsoka.
Muna 1965, ndakakokwa kunopinda kirasi yechi41 yeChikoro cheGiriyedhi uye panguva iyoyo ndainge ndisati ndaroora. Vakawanda vandaiva navo mukirasi yacho vainge vasati varoorawo. Ndakashamiswa chaizvo pandakapedza kudzidza nokuti ndakanzi ndidzokere kuAustria kuti ndinopfuurira kuva mutariri wedunhu. Asi ndisati ndabva kuUnited States, ndakakumbirwa kuti ndishande nemumwe mutariri wedunhu kwemavhiki mana. Ndakaonga chaizvo kushanda kwandakaita naAnthony Conte, uyo aifarira chaizvo basa rokuparidza uye airigona chaizvo. Takashanda tose kuNew York munzvimbo inonzi Cornwall.
Pandakasvika kuAustria, ndakanzi ndinofambira kune rimwe dunhu kwandakaonana neimwe tsvarakadenga yainzi Tove Merete. Akarerwa muchokwadi kubvira paaiva nemakore mashanu. Hama padzinotibvunza kuti makaonana sei, tinowanzopindura tichiseka zvedu kuti, “Hofisi yebazi ndiyo yakatirongera.” Takachata papera gore muna April 1967, uye takabvumirwa kuramba tiri mubasa rokufambira.
Gore rakatevera racho, ndakaziva kuti Jehovha ainge andiitira mutsa usina kukodzera kuwanwa nokundigamuchira semwanakomana wake womudzimu. Saka ndakatanga kuva neukama hunokosha chaizvo naBaba vangu vokudenga pamwe nevamwe vose vanoshevedzera kuti: “Abha, Baba!” maererano naVaRoma 8:15.
Ini naMerete takaramba tiri mubasa redunhu uye reruwa kusvika muna 1976. Dzimwe nguva mumwaka wechando, tairara mudzimba dzaitonhora chaizvo. Pane imwe nguva takamuka tikaona kuti nechokumusoro kwedu, magumbezi ainge aomarara uye achena nechando. Takazosarudza kufamba tiine hita yemagetsi kuti tisazonyanya kutonhorwa usiku. Mune dzimwe nzvimbo, chimbudzi chaiva kunze kweimba saka usiku taitopfuura nemusinou tichienda kwachaiva. Taisavawo neimba yataiti ndiyo yeduwo, saka musi weMuvhuro tairamba tiri pamba patainge tagamuchirwa paungano yatinenge tiri. Taizoenda kune imwe ungano Chipiri mangwanani.
Ndinofara kuti kwemakore ose aya mudzimai wangu ange achinditsigira chaizvo. Anoda chaizvo kuparidza uye haamiriri kuti ndimuudze kuti abude muushumiri. Anofarirawo hama dzechiKristu uye ane hanya chaizvo nevamwe. Izvi zvave zvichindibatsira chaizvo.
Muna 1976 takakokwa kuti tinoshanda pahofisi yebazi yekuAustria iri kuVienna uye ndakagadzwa kuva nhengo yeDare Rebazi. Panguva iyoyo, hofisi yebazi yokuAustria ndiyo yaitungamirira basa raiitwa munyika dzakawanda dzokuEastern Europe uye yairongawo kuti mabhuku otumirwa sei pachivande kunyika idzi. Hama Jürgen Rundel ndivo vaitungamirira basa iri. Ndakawana ropafadzo yokushanda navo uye ndakazonzi nditarisire basa reshanduro mumitauro gumi yokuEastern Europe. Jürgen nemudzimai wake Gertrude, vachiri kushanda semapiyona chaiwo kuGermany. Kubva muna 1978, bazi rokuAustria rakatanga kugadzira magazini uye kuapirinda mumitauro mitanhatu richishandisa kamuchina kadiki. Taitumirawo magazini edu kunyika dzakasiyana-siyana kuvanhu vainge vakanyoresa. Otto Kuglitsch uyo ava kushanda nemudzimai wake Ingrid pahofisi yebazi iri kuGermany, ndiye aitungamirira basa iri.
KuAustria ndainakidzwa chaizvo nokuita ushumiri hwakasiyana-siyana kusanganisira kuparidza mumugwagwa
Hama dzokuEastern Europe dzaizvipirindirawo mabhuku munyika madzo dzichishandisa michina midiki. Asi dzaidawo kubatsirwa nehama dzokune dzimwe nyika. Jehovha akadzivirira basa iri uye takapedzisira tava kuda hama dzaiva pabazi idzo dzainge dzashumira Jehovha mumamiriro ezvinhu akaoma panguva yairambidzwa basa redu kwemakore akawanda.
Muna 1989, ndakawana ropafadzo yokuenda kuRomania naHama Theodore Jaracz, nhengo yeDare Rinodzora. Chinangwa chedu chaiva chokubatsira boka rakakura redzimwe hama kuti dzibatane zvakare nesangano. Kutanga muna 1949, vakanga vasiya sangano nemhaka yezvikonzero zvakasiyana-siyana uye vakanga vatoumba ungano dzavo. Asi vaiparidza uye vaibhabhatidza vanhu. Vakaiswawo mujeri nemhaka yokuramba kupinda muchiuto sezvaingoitwawo nedzimwe hama dzaiva musangano. Basa redu rakanga richiri kurambidzwa kuRomania saka takaungana mumba maHama Pamfil Albu pamwe chete nevakuru vana vaitungamirira boka iroro uye vamiririri veDare Rinotarisira Basa muRomania. Takabvawo nemuturikiri kuAustria, Rolf Kellner.
Usiku hwechipiri patainge takaungana tichitaurirana, Hama Albu vakanyengetedza vamwe vakuru vana vavaiva navo kuti vabatane nesu vachiti, “Kana tikasazviita izvozvi, hatizombowani mumwe mukana.” Hama dzinenge 5 000 dzakazobatana nesu musangano. Chokwadi Jehovha ainge akunda uye Satani ainge akundwa!
Gore ra1989 rava kuda kupera, chiCommunism chisati chapera muEastern Europe, ini nemudzimai wangu takakokwa neDare Rinodzora kuzoshanda pamahofisi edu makuru kuNew York. Takanga tisingatombozvitarisiri. Takatanga kushumira paBheteri rokuBrooklyn muna July 1990. Muna 1992, ndakagadzwa kuva mubatsiri muDare Rebasa reDare Rinodzora uye kubva muna July 1994, ndine ropafadzo yokuva muDare Rinodzora.
KUFUNGA ZVAKAITIKA KARE UYE ZVICHAITIKA MUNE RAMANGWANA
Ndiine mudzimai wangu kuBrooklyn, New York
Pava nenguva yakareba kubva pandakashanda pahotera sahweta. Iye zvino ndine ropafadzo yokubatsira kugadzira uye kupa zvokudya zvokunamata kuhama dzedu dziri munyika yose. (Mat. 24:45-47) Kana ndikafunga zvakaitika mumakore anopfuura 50 andave ndiri mubasa renguva yakazara, ndinofara uye ndinoonga chaizvo Jehovha nokukomborera kwaakaita sangano rehama dziri munyika yose. Ndinoda chaizvo kupinda magungano edu enyika dzakawanda uko kwatinonyanya kudzidza nezvaBaba vedu vokudenga Jehovha, uye chokwadi chiri muBhaibheri.
Ndinotarisira kuti mamiriyoni evanhu achadzidza Bhaibheri ogamuchira chokwadi, uye oshumira Jehovha akabatana nesangano redu rehama dzechiKristu riri munyika yose. (1 Pet. 2:17) Ndinotarisirawo kuzoona vanhu vachimutswa panyika ndiri kudenga uye kuona baba vangu vakandibereka. Ndinovimba kuti baba vangu, amai vangu nedzimwe hama dzangu vachada kunamata Jehovha muParadhiso.
Ndinotarisira kuzoona vanhu vachimutswa panyika ndiri kudenga uye kuona baba vangu vakandibereka
^ ndima 15 Ona nyaya yavo youpenyu muNharireyomurindi yeChirungu yaNovember 1, 1979.
^ ndima 27 Mazuva ano hakusisina muranda weungano uye mubatsiri wemuranda weungano, asi mudare rimwe nerimwe revakuru mava kugadzwa murongi uye munyori.